कसरी सिरी रिमोट सेट अप गर्ने आईफोन समाचार
नयाँ चौथो जेनरेशन एप्पल टिभी कन्ट्रोल नोबले आफ्नो पूर्ववर्ती भन्दा बढि सुविधाहरू ल्याउँछ। एक ट्र्याकप्याड मेनूको माध्यमबाट नेभिगेट गर्न वा विकल्पहरू छनौट गर्न, तपाईंको टेलिभिजनको भोल्यूम र पावर नियन्त्रण गर्ने क्षमता, सिरीको लागि माइक्रोफोन, इत्यादि। हामी नयाँ सिरी रिमोटले प्रस्ताव गरेको कन्फिगरेसन विकल्पहरू के हुन् भनेर हामी भिडियोमा विश्लेषण गर्छौं र हामी यसलाई कसरी रिसेट गर्न सक्छौं र फेरि यसलाई एप्पल टिभीसँग पेयर गर्न सक्दछौं।.
सिरी रिमोट कन्ट्रोल नोबले हामीलाई नयाँ एप्पल टिभीको मेनुहरूमा नेभिगेट गर्न मात्र अनुमति दिँदैन, तर यो भिडियो गेमहरूको लागि नियन्त्रण नब पनि हो। यसको जाइरोस्कोप र एक्सेलेरोमीटर ड्राईभिंग खेलहरू वा बीट स्पोर्ट्स जस्ता खेल खेलहरूका लागि उत्कृष्ट हो किनकि यसले निन्टेन्डो वाई नियन्त्रकको अपरेसनको पूर्ण नक्कल गर्दछ। यसको ट्र्याकप्याड केहि खेलहरू नियन्त्रण गर्न प्रयोग गर्दछ, मेनूहरू नेभिगेट गर्नका साथै अन-स्क्रिन कुञ्जीपाटी प्रयोग गरी टाइप गर्दै। ट्र्याकप्याड संवेदनशीलता सेटिंग धेरै उपयोगी छ यदि तपाइँ कर्सर आन्दोलन धेरै छिटो वा ढिलो लाग्छ भने। tvOS ले हामीलाई संवेदनशीलताको तीन तहहरू बीचमा छनौट गर्न अनुमति दिन्छ, मध्यवर्ती विकल्प डिफल्टद्वारा चयन गरिएको त्यो एक हो।
नयाँ रिमोट कन्ट्रोल थप्न सक्षम हुनुहोस् यो पनि एक सम्भावना हो जसले हामीलाई धेरै खेलहरू खेल्न अनुमति दिनेछ जुन धेरै व्यक्तिहरूद्वारा मल्टिप्लेयर अनुमति दिन्छ। यो जान्न पनि महत्त्वपूर्ण छ कि कन्ट्रोल नब कसरी रिसेट भयो यदि यो गलत तरीकाले काम गर्दछ वा हामी केवल नयाँ नियन्त्रण थप्न चाहन्छौं जुन हामीले किनेको हो, वा यसलाई सामान्य एप्पल टिभीमा प्रयोग गर्दछौं। रिमोट कन्ट्रोललाई एकातिर राख्न र एप्पल टिभी रिमोटको साथ सबै कुरा नियन्त्रण गर्न सक्षम हुनको लागि अन्तमा, हामी भोल्युम र तपाईंको टेलिभिजनको अन र अफ नियन्त्रण गर्न सिरी रिमोटको कार्यहरूको बारेमा पनि कुरा गर्छौं।
लेखको पूर्ण मार्ग: आईफोन समाचार » आईफोन » ट्यूटोरियल र म्यानुअल » कसरी सिरी रिमोट सेट अप गर्ने
आईएसओ कीनोटका साथ प्रयोगका लागि सिरी रिमोटलाई आईफोन to मा जडान गर्न सकिन्छ?
यस क्षणको लागि होईन
धेरै धेरै लुइस धन्यवाद
पीडीएफ विशेषज्ञ,, हप्ताको आवेदनको साथ पिडिएफ सम्पादन गर्नुहोस्